Amanasitii Intarnaashinaal: ''Motumaaan garee Liyu poolisii seeraan ala ajjeechaa rawwataa jiru bittinsu qaba'' - BBC News Afaan Oromoo
Dhaabbanni quuqamaa mirga namoomaa ta'a Aministii Intarnaashinaal Motummaa Itoophiyaa atatamaan garee Liyu polisii naannoo Somaalee kan miseensoonni isaanii seeraan ala naannoo Oromiyaa ollaatti namoota ajjeessaa jiran basuufi bittinsu qaba jechuun har'a ibsa baaseera.
Dhaabbatichi ibsa isaa anaanis garee humna poolisii addaa naanichatti shororkeessitoota ittisuuf jecha hundeefame kunis, torban kana keessa nammeen jirattotaa Oromootaa 48 kan naannoo Somaalee keessa jiraatan gubuun naannicha gadhiisanii akka bahaniif taasisaniiru jedheera.
Itti dabalunis ''moummaan Itoophiyaa atattamaan garee liyu polisii kana diiguun polisiin seera mirga namoomaa addunyaatiin bitamaniin bakka busuu qabas jedheera. Akkasumsa garee polisii gara jabbiiyyii ta'an kunneen aka barbaadanitti ummata akka hindararree hayyamamu hinqabaatu'' jedhaniiru dhaabbatichatti direktarri Afrikaa Bahaa, Gaanfaafi biyyota Gireet Lakii, Joon Nyaanyukii.
Garee kunis Caamsaa 23 fi 24 gandoota ollaa naannoo Oromiyaa kan ta'ee Cinaaksan keessatti namoota shan ajjeessuun nammeen jireenyaa 50 gubaniiru. Haalli kunis jiraattoonni mana isaanii dhiisanii lubbuuf akka baqatan taasiseera jedheera, ibsichi.
Aanga'oonnis lola sadarkaa naannootiin deegarmee fakkaatu kana dhaabisuu qaba kan jedhe ibsichi, tarkaanfiin jalqabaa polisoonni naannicha keessatti argaman hundi kan seera kabajan ta'uu mirkanneessuudha jedheera.
''Tarkaanfiin itti aanuu ammoo kanneen yakkaa kana raawwatan karaa bilisaa fi walaba ta'een haala gadhii fageenya qabuu qoratee seeratti dhiyeessudha.''
Bara 2017tti garee kun Naannoo Oromiyaa keessa galuun du'aatii dhibba hedduufi buqqa'insa miliyoonootaaf madda ta'u, gabaasa Komishinii To'annoo Balaa Tasaa biyyaaleessaa Itoophiyaafi Waajjira Mootummoota gamtoomaniitti qindeessaa Dhimmoota namoomaa eere jira.
Dhimma kanarratti yaada motummaa naannoo Somaalee dhaga'uuf yaaliin yeroo garaa garaa taasifne nuuf milkaa'u hindandeenye. Ammas yoo kan nutti dubbatu arganne keessummeessuuf qophaa'oodha.
Walgahiin koree giddugaleessaa ODP taasifamuu eegale